Siid Cali waxa uu ku tilmaamey Injineer Maxamuud Xuseen Caliyow Ibrow, inuu fududaadey islamarkaana uu ka hadley wax alle iyo wixii uu qalbigiisa ku jirey oo aheyd inaan anigu tanaasulo.
Tanaasul waxaaba ka horeeya in Meel la isugu imaado oo la wada hadlo, daraad waan wacey telka ayuu iga qaban waayey mana jirin inaan iskala hadalney Arimo noocaas ah ee dulmiga ha la iska daayo dadkaan halaga shaqeeyo horumarkooda ayuu yiri siid Cali.
Injineer Siid Cali mar,aan weydiiney waxa uu ku diidayo hadii dadkii awal doortay hadana ay la jecleysteen in xilkii laga qaado oo la doortay Gudoomiye kale ayaa waxa uu sheegy in dadka warqada usoo qorey oo xilka ka qaadey ay ahaayeen 5 qofood, wuxuuna ku doodey in 5 Qofood keliya aaney aheyn DM.
Wuxuu kaloo iska fogeeyey inuu kala geeyey DM Uk oo Gabdhihiina ay isku direen, wuxuu sheegey iney hada lacago aruurinayaan oo ay ugu tala galeen Abaaraha siid cali wuxuu warkiisa kusoo koobey Inuu asagu yahay Kan rasmiga ah ee hogaaminaya Jaaliyada DM ee Dalka Ingriiska.
Wareysiga Siid Cali Halkaan Ka Dhageyso,